Good in aad aragto in English. Good in aad aragto Meaning and Somali to English Translation
Home>Words that start with G>Good to see you>Good in aad aragto (Somali to English translation)
What does Good in aad aragto mean in English? If you want to learn Good in aad aragto in English, you will find the translation here, along with other translations from Somali to English. We hope this will help you in learning languages.
Here is Good in aad aragto meaning in English:
Fadlan i siiyo fursad
Ma heli karaa rasiid fadlan?
Ma idinkaa qalinka this?
Ma ii sheegi kartaa baaqiga xisaabta iigu jira?
Rajaynaynaa in ay mar kale aad aragto
Waa maxay waxyaabaha waa jaakad ka samaysan?
waxaad iigu cadhoonaysaan?
Waxaad tahay xiriirka